Kuwanika kuri kuramba kuchivandudza muApple zvitoro | IPhone nhau
Kuwanika kuri kuramba kuchivandudza muzvitoro zveApple
Uye ndeyekuti kune Apple kuwanika zvese muzvigadzirwa uye muzvitoro zvacho chinhu chakakosha kwazvo. Mune ino kesi, isu hatisi kutaura nezve zvinowanikwa zvakagadziriswa muzvitoro izvo vazhinji vane, tiri kutaura nezvesarudzo nyowani iyo Apple inopa bhuku musangano pamwe nemuturikiri wemutauro wemasaini. Iyi sarudzo nyowani, inowanikwa munzvimbo dzinoverengeka dzezvitoro zveApple kutenderera pasirese, inobvumira mushandisi kusangana panguva yakatarwa uye zuva kuti agamuchire rutsigiro kubva kuna nyanzvi yemutauro wemasaini.
Pamwechete, chikumbiro chekugadzwa ichi chinofanirwa kuitwa kuburikidza neemail kero yechitoro pachayo uye zvinosuwisa kuti haisi kuwanikwa munyika dzese, zvirinani izvozvi. Parizvino basa rekugadzwa iri nemuturikiri wemutauro wemasaini rinowanikwa pa: USA, UK, Australia, Canada, France, Germany, Italy, Sweden, Switzerland, Belgium, uye Austria.
Munguva ye2019 kambani yatotanga kupa aya mabasa ekuturikira muchitoro chayo muCarnegie Library muDC KuApple vane chibvumirano chakasainwa naGallaudet, iyo inopa basa redzidzo munharaunda yematsi. Vanenge makumi matatu nhengo dzeiyi matsi uye yakaoma yekunzwa nharaunda vanoshanda kuApple Chitoro mukati meCarnegie Library.
Akawanda ezvikamu zvinopihwa nekambani muzvitoro zvayo inonzi "Nhasi kuApple" vatove nemuturikiri akadaro. apo vabatsiri vanozvikumbira. Kutendeseka, zvakakosha pakubatanidzwa munharaunda. Isu tinovimba kuti Apple ichaishandisa mune yega uye yega yega yezvitoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Kuwanika kuri kuramba kuchivandudza muzvitoro zveApple
Siri iri kudzidzira kuti unzwisise zvirinani vashandisi vanokakama
Iyo Apple de Sol uye Gran Plaza 2 inogona kudzokera kune yakajairwa Muvhuro unotevera, Kurume 1